Ningbo Albert Novosino (Ningbo Albert Shina) dia maoderina,-teknolojia avo sy mitondra zava-baovao amin'ny lohany biraon'ny orinasa miorina any Alemaina. Manana mpiara-miasa ao amin'ny Albert 180 Shina, miaraka amin'ny 8 injeniera ho famolavolana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao. Ao amin'ny tsena segmented rehetra, dia misolo tena ny ambony toetra.
Albert Group dia globalizational orinasa amin'ny toerana any Alemaina, Etazonia, Sina ary Polonina. Global injeniera ekipa fanehoan-kevitra sy ny fifadian-kanina no miantoka avo lenta ny tetikasa vaovao sy ny mpanjifa vahaolana. Global orinasa mpamokatra entana no miantoka fifadian-kanina sy ny fanaterana sy ny asa fanompoana mahomby.
Amin'ny miavaka Nalaza ho tsara, vokatra sy ny zava-baovao ara-teknika tena tsara, dia mamokatra Efa maro samihafa ny kilasy vokatra ara-pitsaboana ho an'ny fitsaboana, fitsaboana manokana sy ny tsena ho an'ny orinasa ny 30 taona mahery. Ankoatra ny fitsipika ankapobeny tsena vokatra, isika, fomba amam-panao ihany koa mamokatra vokatra ao amin'ny toerana tany Eoropa, Azia sy Amerika Avaratra. Nandritra ny taona maro, ny mpanjifa no tonga lanja ny manovaova sy ny fitsipika faran'izay tsara ny Albert Manufacturing Shina sy ny Albert Group.
Manana mahery dia mahery no malalaka fanodinana hihaona amin'ny ambony kalitao eny an-tsena.
Custom Design sy ny Fampandrosoana
Albert vondrona mpanjifa mifantoka amin'ny zava-dehibe. Ny taona rehetra, tsy manam-paharoa isika fanavaozana vokatra sy ny vahaolana ho an'ny mpanjifa. Fanatontoloana dia aoka isika hahatakatra ny tena fangatahana.
Tsindrio eto raha hianatra bebe kokoa momba Custom Solutions.